Wakaalada Naqshadaynta,Daraasaadka iyo Dabagalka oo Durba u Dhaqaaqday Fulinta balanqaadkii Bulshada Madaxweynha Dhanka Biyaha Socdaalkii Nolol iyo rajo-Rumays - Cakaara News
Wakaalada Naqshadaynta,Daraasaadka iyo Dabagalka oo Durba u Dhaqaaqday Fulinta balanqaadkii Bulshada Madaxweynha Dhanka Biyaha Socdaalkii Nolol iyo rajo-Rumays
Godey(CakaaraNews) Axad July 28,2013. Maadaama ay xukuumada Degaanka ka arimisa ay si xawli ah ku hirgalineyso qorshayaal kor loogu qaadayo dhamaan adeegyada aas-aasiga ah iyo kaabayaasha dhaqaale,islamarkaana xukuumada iyo hogaaminta sare ay suragaliyeen in ay bulshada deegaanku si toos aha uga qeyb-galiso qorshayaasha hormarineed iyaado si toos ah loola tashanayo qeybaha kala duwan ee bulshada. Socdaalkii nolol iyo rajo-rumeynta shacabka ee dhanka isku socodka dadka, duunyada iyo gaadiidka ayaa waxaa ay Bulshadii ku dhaqnayd Deegaanadii ay Waftiga Madaxweynaha DDSI booqdeena Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ka codsanayeen wax ka qabashada bahidooda asaasiga ah ee haysta,islamarkaana uu Madaxweynuhu balanqaad u fidinayay Bulshada laamaha ku shaqada lehna Deg deg amar ugu siinayay in sida ugu dhaqsaha badan looga jawaabo baahida shacabka.
Hadaba, si ay uga jawaab bixiiyaan balan-qaadyadii Madaxweynaha iyo Awaamiirtii la xidhiidhay in deg deg looga jawaabo wax ka qabashada baahida shacabka ayaa Maareeyaha Wakaalada Naqshadeynta, Daraasaadka iyo Dabagalka Mudane Guuleed Aw Cali oo hoggaaminayay khabiiro kala duwan oo ka tirsan wakaalada ay Degdeg ku tageen degmooyinka Dhanaan iyo Beercaano, islamarkaana ku sii wajahaan degmooyiin kale si ay uga soo sameeyaan daraasaadyo kala duwan.
Khabiiradan oo iskugu jira geologist, hydro-geologist, geo-physics iyo engineero kale ayaa ah kooxdi ugu horeeysay ee ka jawaab bixisa balan-qaadiyadii Madaxweynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
Mareyaha Wakaalada Naqshadeynta, Daraasaadka iyo Dabagalka Mudane Guuleed Aw Cali oo khadka telefoonka nagula soo xidhiidhey ayaa noo shegey in ay wakhti xadirkan dhameeystireen Mushruuc weyn oo ah Biyo Galin, Mashruucaas oo ay ka faa’iideysan doonan dad iyo duniyo tiro badan. Bulsho dhan 235’000 iyo xoolo gaadhaya 4,000,000 oo nef kuwaas oo ku kala dhaqan Degmada Beercaano, Laab, Dudun, Harmadobe, Degmada Dhanaan, walaalgo, Koore, Iijiid iyo Hadhawe, 17 aad oo ka tirsaan Degmada Godey.
Danan Multi Water Supply Project Dhanka kale sida uu sheegay Magaalada Dhanaan ayaa biyaha looga soo jiidi doonaa Wabisha shabeele.